Leica Geosystems na-enye ngwa oru ohuru iji weghachite data onpographic - Geofumadas
Eprel, 2019 GPS / Equipment, topografia
HEERBRUGG, SWITZLAND, 10 OF APRIL OF 2019 - Leica Geosystems, nke Hexagon, taa kwupụtara ntinye nke ngwá ọrụ ọhụrụ maka ijide, nhazi na usoro nhazi; Leica iCON iCT30 iji nyekwuo arụmọrụ maka ụlọ ọrụ ihe owuwu.
Ngwaọrụ iCON iCT30, yana Leica iCON ngwanrọ ihe owuwu, bụ ihe dị mfe iji na ọnụ ọnụ iji bulie arụ ọrụ site na mbenata oge ọrụ na njehie, ebe ị na-eme ka isi ihe dị mkpa maka ịchọta ozi. Ihe ọhụrụ iCT30 bụ ihe eji eme ihe eji eme ihe nke na-eme usoro maka ijide data na itinye aka na usoro ihe owuwu.
"A na-emepụta IIC30 Leica iCONOM maka ndị ọrụ ndị ga-ebugharị site na nyocha na usoro nhazi maka usoro ọrụ arụmọrụ. Akụrụngwa na ngwanrọ dị mfe iji, "ka Shane O'Regan, Leica iCON ọkachamara ngwaahịa na Leica Geosystems kwuru. "Ngwá ọrụ ọhụrụ bụ akụkụ nke pọtụfoliyo iCON maka iwuli ụlọ ma jikọta ya n'ime software iCon nke a kwadebere maka ịwu ihe, na-enye nsụgharị kachasị nke ụdị ndị a sụgharịrị n'ụzọ zuru ezu na .IFC."
Atụmatụ na-elekwasị anya n'ịdị na-arụ ọrụ.
Ọrụ nke ọrụ a dị mfe, bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi, na ọrụ otu onye bụ ụfọdụ n'ime njirimara njirimara nke iCT30. Ọ bụ ngwa ngwa ngwa ngwa siri ike nke nwere ike ịrụ ọrụ na ogologo oge nke ikike ikike ikike, na-enwe ike ịrụ ọrụ na ọnọdụ saịtị siri ike, dịka ntụgharị uche, akara nkwụsị anya ma ọ bụ mkpọchi. Site na iCT30, ndị ọrụ ga-ejidekwu isi kwa ụbọchị, na-agba ọsọ usoro iwu nke dabere na nsonaazụ nyocha.
A ga-emepe ICT30 IIC ọhụrụ nke Leica i BAUMA na Munich, Germany. Maka ngosi ngosi ndị dị irè, gaa na Hexagon na Ụlọ A2, Guzo 137.
Maka ama ndi ozo banyere usoro ohuru ihe owuwu, gaa leta https://leica-geosystems.com/en-GB/products/construction-tps-and-gnss/leica-icon-ict-30
Leica Geosystems - mgbe ọ ga-adị mma
Hexagon bụ onye ndu ụwa na ngwọta dị larịị nke na-emepụta ihe ndị ejiri na-ejikọta onwe ha (ACEs). Hexagon (Stockholm Stockholm: HEXA B) nwere ihe dịka ndị ọrụ 20,000 na mba 50 na ntanetị ahịa nke ihe dịka 3.8 trillion Euro. Nweta ozi ndi ozo banyere hexagon.com ma soro anyi @HexagonAB.
Maka ama ndị ọzọ, kpọtụrụ:
Ekwentị: + 41 41 727 8960
Previous Post«Previous Kedu ihe ntinye nke casinos ji ghọọ ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ
Next Post Bentley Systems na-ahọpụta Dr. Nabil Abou-Rahme dị ka Director nke ResearchNext »